သငျမွငျဖူးမှာမဟုတျတဲ့ ဂပြနျရထားတှရေဲ့ အံ့အားသငျ့စရာ အခကျြမြား
HomeKnowledgeသငျမွငျဖူးမှာမဟုတျတဲ့ ဂပြနျရထားတှရေဲ့ အံ့အားသငျ့စရာ အခကျြမြား
H July 12, 2021
ဂပြနျနိုငျငံမှာ ခရီးသညျတှေ အတှကျ အဓိက သယျယူပို့ဆောငျရေး ကတော့ ရထားတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။ ကမ်ဘာပျေါက အလုပျအမြားဆုံး ဘူတာ 51 ခုမှာ ဂပြနျနိုငျငံက ဘူတာ 45 ခု ပါဝငျ ပါတယျ။ ဂပြနျနိုငျငံရဲ့ တိုးတကျတဲ့ နညျးပညာတှကေ ဂပြနျနိုငျငံသားတှရေဲ့ ဘဝကို အကြိုးမြားစှာ ရှိစပေါတယျ။ ဂပြနျနိုငျငံက ရထားတှဟော သကျတောငျ့သကျသာဖွဈတဲ့ နရောမှာ စံထားရလောကျ ပါတယျ။
1. Sunrise Express
Sunrise Expressက အိပျစငျတှေ ပါဝငျတဲ့ ရထားလိုငျး ဖွဈပါတယျ။ Sunrise Express မှာ Windows Izumo နဲ့ Sunrise Seto ဆိုပွီး ရထားနှဈစီး ရှိပါတယျ။ ဒီရထားနှဈစီးပဲ Tokyo ကနေ Okayama အထိ အတူတူ ပွေးဆှဲပွီး လမျးခှဲသှား ပါတယျ။ Sunrise Izumo က Izumoshi ကို သှားနတေဲ့ အခြိနျမှာ Sunrise Seto က Takamatsu ကို သှားပါတယျ။
အပွနျခရီးမှာ ရထားနှဈစီးမှာ Okayamaမှာ ဆုံပွီး Tokyo ကို အတူတူ ပွနျပွေးဆှဲ ပါတယျ။ ရထားနဲ့ ခရီးသှားခွငျးက ဂပြနျနိုငျငံရဲ့ ယဉျကြေးမှုတှနေဲ့ လူနမှေုဘဝကို လလေ့ာပွီးသား ဖွဈစမှောပါ။ ဒါ့အပွငျ ရှုခငျးကောငျးကောငျးတှကေိုလညျး တှရေ့ဦးမှာပါ။
ခတျေသဈရထားတှနေဲ့ မတူတဲ့ Sunrise ရထားတှမှော အခနျးအမြိုးအစာ6းမြိုး ပါဝငျပါတယျ။ A classက သကျတောငျ့သကျသာ ရှိတဲ့ တဈယောကျခနျးဖွဈပါတယျ။ အဲဒီအခနျးထဲမှာ ထိုငျခုံ တဈလုံး၊ စားပှဲတဈလုံး၊ မကျြနှာသဈစငျနဲ့ အိပျရာ ပါဝငျပါတယျ။ အလငျးရောငျလညျး ရပွီး ရဒေီယိုလညျး နားထောငျလို့ ရပါတယျ။ တဈယောကျခနျး ထဲမှာ စီးဖို့ ဖိနပျပါးတဈရံ၊ ရခြေိုးခနျးအဝငျ အထှကျ ဝတျရုံ၊ တဈကိုယျရသေနျ့စငျသုံး ပစ်စညျးတှလေညျး ပါဝငျပါတယျ။ A class အခနျးထဲမှာ နပွေီး ရထားစီးရတာက ရှလြေ့ားနတေဲ့ ဟျောတယျထဲ ရောကျနသေလို ခံစားရမှာပါ။ ပွူတငျးပေါကျ ကနလေညျး ဒသေရဲ့ အလှအပတှေ ကိုလညျး ငေးကွညျ့လို့ ရပါတယျ။
ရထားထဲက နောကျထပျအခနျး အမြိုးအစားက B class ဖွဈပါတယျ။ B classမှာ Sunrise Twin, Single Twin, Single, solo ဆိုပွီး အခနျးတှေ ခှဲထားပါတယျ။ B class က အခနျးတှမှော တဈယောကျတညျး နလေို့ရသလို နှဈယောကျလညျး နလေို့ ရပါတယျ။ B class ကလညျး A class လိုပဲ ခရီးသှားရတာ သကျတောငျ့သကျသာ ဖွဈစပေါတယျ။ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ အတူတူ ခရီးထှကျရငျ B classက အဆငျပွေ မှာပါ။
Nobinobi class မှာလညျး အိပျလို့ရတဲ့ အခနျးတှေ ပါဝငျပါတယျ။ Nobinobi မှာ နှဈထပျကုတငျတှေ ပါဝငျပါတယျ။ ကုတငျတှကေ ကယျြပါတယျ။ ကုတငျတဈခုစီကို သဈသားနံရံသေးသေးလေး တှနေဲ့ ခွားထားပါတယျ။ ပွူတငျးပေါကျ ကနလေညျး အပွငျက ရှုခငျးတှကေို ကွညျ့လို့ ရပါတယျ။
Nobinobi class နဲ့ ခရီးသှားရငျ မိတျဆှအေသဈတှေ တိုးလာ မှာပါ။
5. ၆ မိနဈ ရခြေိုးခနျး
Sunrise ရထားတှဲတှမှော သနျ့စငျခနျး၊ သောကျစရာတှေ ရောငျးပေးတဲ့စကျ၊ ဆေးလိပျ သောကျပွီး အနားယူလို့ရတဲ့ အခနျးတှေ ပါဝငျပါတယျ။ ရထားထဲက အခနျးလေးတှေ ထဲမှာ wheelchair တဈခုစီလညျး ပါဝငျ ပါတယျ။ စိတျဝငျစားစရာကောငျးတာက ရခြေိုးခနျးပါ။ ရခြေိုးဖို့အတှကျ ကတျပွားလေးဝယျရမှာပါ။ ရခြေိုးဖို့ ရေ6မိနဈလာပွီး timer မှာ အခြိနျတှေ ရတှေကျနေ ပါတယျ။6မိနဈ အတှငျးမှာ ခေါငျးလြှျောတာ၊ ဆပျပွာတိုကျတာကို မွနျမွနျ လုပျရမှာပါ။ ဒီလိုရခြေိုးတာက ဂပြနျနိုငျငံက ရိုးရာရခြေိုးနညျးဖွဈပွီး ရခြေိုးပွီးရငျ အလိုအလြောကျ သနျ့ရှငျးရေးလုပျပေးတဲ့ စကျကို နှိပျပေးရမှာပါ။
သင်မြင်ဖူးမှာမဟုတ်တဲ့ ဂျပန်ရထားတွေရဲ့ အံ့အားသင့်စရာ အချက်များ
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ခရီးသည်တွေ အတွက် အဓိက သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကတော့ ရထားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်က အလုပ်အများဆုံး ဘူတာ 51ခုမှာ ဂျပန်နိုင်ငံက ဘူတာ 45 ခု ပါဝင် ပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ တိုးတက်တဲ့ နည်းပညာတွေက ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ ဘဝကို အကျိုးများစွာ ရှိစေပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံက ရထားတွေဟာ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်တဲ့ နေရာမှာ စံထားရလောက် ပါတယ်။
Sunrise Expressက အိပ်စင်တွေ ပါဝင်တဲ့ ရထားလိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ Sunrise Express မှာ Windows Izumo နဲ့ Sunrise Seto ဆိုပြီး ရထားနှစ်စီး ရှိပါတယ်။ ဒီရထားနှစ်စီးပဲ Tokyo ကနေ Okayama အထိ အတူတူ ပြေးဆွဲပြီး လမ်းခွဲသွား ပါတယ်။ Sunrise Izumo က Izumoshi ကို သွားနေတဲ့ အချိန်မှာ Sunrise Setoက Takamatsu ကို သွားပါတယ်။
အပြန်ခရီးမှာ ရထားနှစ်စီးမှာ Okayamaမှာ ဆုံပြီး Tokyo ကို အတူတူ ပြန်ပြေးဆွဲ ပါတယ်။ ရထားနဲ့ ခရီးသွားခြင်းက ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့ လူနေမှုဘဝကို လေ့လာပြီးသား ဖြစ်စေမှာပါ။ ဒါ့အပြင် ရှုခင်းကောင်းကောင်းတွေကိုလည်း တွေ့ရဦးမှာပါ။
ခေတ်သစ်ရထားတွေနဲ့ မတူတဲ့ Sunrise ရထားတွေမှာ အခန်းအမျိုးအစာ6းမျိုး ပါဝင်ပါတယ်။ A classက သက်တောင့်သက်သာ ရှိတဲ့ တစ်ယောက်ခန်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအခန်းထဲမှာ ထိုင်ခုံ တစ်လုံး၊ စားပွဲတစ်လုံး၊ မျက်နှာသစ်စင်နဲ့ အိပ်ရာ ပါဝင်ပါတယ်။ အလင်းရောင်လည်း ရပြီး ရေဒီယိုလည်း နားထောင်လို့ ရပါတယ်။ တစ်ယောက်ခန်း ထဲမှာ စီးဖို့ ဖိနပ်ပါးတစ်ရံ၊ ရေချိုးခန်းအဝင် အထွက် ဝတ်ရုံ၊ တစ်ကိုယ်ရေသန့်စင်သုံး ပစ္စည်းတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ A class အခန်းထဲမှာ နေပြီး ရထားစီးရတာက ရွေ့လျားနေတဲ့ ဟော်တယ်ထဲ ရောက်နေသလို ခံစားရမှာပါ။ ပြူတင်းပေါက် ကနေလည်း ဒေသရဲ့ အလှအပတွေ ကိုလည်း ငေးကြည့်လို့ ရပါတယ်။
ရထားထဲက နောက်ထပ်အခန်း အမျိုးအစားက B class ဖြစ်ပါတယ်။ B classမှာ Sunrise Twin, Single Twin, Single, solo ဆိုပြီး အခန်းတွေ ခွဲထားပါတယ်။ B class က အခန်းတွေမှာ တစ်ယောက်တည်း နေလို့ရသလို နှစ်ယောက်လည်း နေလို့ ရပါတယ်။ B class ကလည်း A class လိုပဲ ခရီးသွားရတာ သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်စေပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူတူ ခရီးထွက်ရင် B classက အဆင်ပြေ မှာပါ။
Nobinobi class မှာလည်း အိပ်လို့ရတဲ့ အခန်းတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ Nobinobi မှာ နှစ်ထပ်ကုတင်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ကုတင်တွေက ကျယ်ပါတယ်။ ကုတင်တစ်ခုစီကို သစ်သားနံရံသေးသေးလေး တွေနဲ့ ခြားထားပါတယ်။ ပြူတင်းပေါက် ကနေလည်း အပြင်က ရှုခင်းတွေကို ကြည့်လို့ ရပါတယ်။
Nobinobi class နဲ့ ခရီးသွားရင် မိတ်ဆွေအသစ်တွေ တိုးလာ မှာပါ။
5. ၆ မိနစ် ရေချိုးခန်း
Sunrise ရထားတွဲတွေမှာ သန့်စင်ခန်း၊ သောက်စရာတွေ ရောင်းပေးတဲ့စက်၊ ဆေးလိပ် သောက်ပြီး အနားယူလို့ရတဲ့ အခန်းတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ရထားထဲက အခန်းလေးတွေ ထဲမှာ wheelchair တစ်ခုစီလည်း ပါဝင် ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက ရေချိုးခန်းပါ။ ရေချိုးဖို့အတွက် ကတ်ပြားလေးဝယ်ရမှာပါ။ ရေချိုးဖို့ ရေ6မိနစ်လာပြီး timer မှာ အချိန်တွေ ရေတွက်နေ ပါတယ်။6မိနစ် အတွင်းမှာ ခေါင်းလျှော်တာ၊ ဆပ်ပြာတိုက်တာကို မြန်မြန် လုပ်ရမှာပါ။ ဒီလိုရေချိုးတာက ဂျပန်နိုင်ငံက ရိုးရာရေချိုးနည်းဖြစ်ပြီး ရေချိုးပြီးရင် အလိုအလျောက် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးတဲ့ စက်ကို နှိပ်ပေးရမှာပါ။